August 2021 – Candle Myanmar
ရည်းစား မဖြစ်ခင် အရင်ဦးဆုံး မစွဲလမ်းမိပါစေနဲ့….
ရည်းစား မဖြစ်ခင် အရင်ဦးဆုံး မစွဲလမ်းမိပါစေနဲ့….. ကိုယ့်ကို မစွဲလမ်းခင် ကိုယ်က စွဲလမ်းမိတာ မိန်းကလေးအတွက် မကောင်းပါဘူး…. သူက ကိုယ့်ကို သိပ်ပြီး မတွယ်တာခင်မှာ ကိုယ်က တွယ်တာမိတာလောက် မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် စိတ်ညစ်စရာကောင်းတာ မရှိပါဘူးသူ့ဘက်က ကိုယ့်အပေါ် ဘယ်လောက်အထိ အလေးအနက်ထားလဲ မသိရခင်မှာ ကိုယ့်ဘက်က
လူတွေကို အကဲခတ်နည်းလေးပါ လူတစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာကို ကြည့်ပြီးတော့ သူဘယ်လိုစိတ်ထား၊ ဘယ်လိုအမြင် ရှိတယ်ဆိုတာ အကဲခတ်လို့ရပါတယ်။ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ ဥပမာ…. လူတစ်ယောက်က မျက်လုံးပြူးတယ်ဆိုရင် အမြင်ကျယ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မျက်စိမှေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ အမြင်ကျဉ်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ ပါးလေးတွေ ဖောင်းနေမယ်ဆိုရင် လူပါးဝသူဖြစ်ပြီး ပါးလေးတွေ ပိန်နေရင်တော့ လူပါးမဝသူဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ နားရွက်ကို ကြည့်လိုက်လို့ နားရွက်လေးတွေက
ကိုယ် ဘယ်တုန်းကမှ မေ့ဖို့မကြိုးစားခဲ့မိတာပါ သူနဲ့ ပတ်သက်ခဲ့ဖူးတဲ့ အတိတ်မှာ ပိတ်မိနေတယ်လို့ပဲ ခေါင်းစဥ်တပ်ချင်တော့တယ် ။ သူ့ကို မေ့ချင်တယ်လို့ ပါးစပ်က ရွတ်နေမိပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ ကိုယ် ဘယ်တုန်းကမှ သူ့ကို မေ့ဖို့ မကြိုးစားခဲ့မိသေးဘူး ။ သူနဲ့ ဘယ်တုန်းက စတွေ့ခဲ့တာဆိုတဲ့ ရက်လေးကအစ ဘယ်တုန်းက
မင်း နေတတ်တဲ့ type လေးအတိုင်းပဲနေ ဘယ်သူ့ကြောင့် ဘာအတွက်ကြောင့်မှ ကိုယ့်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို မပြောင်းလဲပစ်နဲ့
မင်း နေတတ်တဲ့ type လေးအတိုင်းပဲနေ ဘယ်သူ့ကြောင့် ဘာအတွက်ကြောင့်မှ ကိုယ့်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို မပြောင်းလဲပစ်နဲ့ လူတစ်ယောက် ကိုယ့်ကို ချစ်လာအောင် ကိုယ့်ပုံစံကို ပြောင်းလဲနေရပြီဆိုကတည်းက တစ်ခုခုတော့ မှားနေပြီမလား။ လူတစ်ယောက်ကိုယ့်ကို ချစ်ဖို့ဆိုတာ လုပ်ယူလို့ ရတဲ့အရာမှ မဟုတ်ဘဲ မင်းပုံစံကို မကြိုက်တဲ့သူက ဘယ်တော့မှ
ကျွန်တော်နဲ့ကျ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့သူက….. တခြားတစ်ယောက်နဲ့ကျ ဖြစ်နိုင်သွားတာမျိုး
ကျွန်တော်နဲ့ကျ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့သူက….. တခြားတစ်ယောက်နဲ့ကျ ဖြစ်နိုင်သွားတာမျိုး ကျွန်တော်နဲ့ကျ ….. တစ်ယောက်ထဲနေပါရစေ ဆိုတဲ့သူက တခြားတစ်ယောက်နဲ့ကျ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေသားတကျဖြစ်လွယ်သွားတာမျိုး။ ဒါမျိုးတွေက ကျွန်တော့်ဘဝမှာ ထွေထွေထူးထူးမဟုတ်တော့ဘူး။ ဒီလိုလူတွေက ….. ” ကျွန်တော် ” ဆွဲထားလို့သာ ပြေးထွက်မသွားတာ။ ကျွန်တော် မောပန်းလာတဲ့အခါ ကြိုးတွေ ဖြေလျော့လိုက်တဲ့အခါ